Kangal Dogs သည်အန္တရာယ်ရှိသလား။ ဒီiantရာမအစောင့်ခွေးအကြောင်းကိုဒဏ္ာရီများနှင့်အဖြစ်မှန် - Breeds
Kangal Dogs သည်အန္တရာယ်ရှိသလား။ ဒီiantရာမအစောင့်ခွေးအကြောင်းကိုဒဏ္ာရီများနှင့်အဖြစ်မှန်
Kangals - ဒီအကြောင်းကိုကြားဖူးလား။ အကယ်၍ သင့်တွင်ရှိလျှင်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် (သို့) ကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုသင်သတိပြုမိခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ Kangal သိုးထိန်း , Kurdish kangal သို့မဟုတ် တူရကီ Kangal , ဒီဖောက်ဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ် ခြိမ်းခြောက် သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကြွက်သားခန္ဓာကိုယ်မှကျေးဇူးတင်စကား။
တစ် ဦး ကခက်ခဲတဲ့နှင့်အကြောက်ကင်းဖောက်
ပထမဆုံး Kangal ခွေးကလေးကိုရယူခြင်း
ဤအားကြီးသောခွေးများသည်တူရကီပြည်နယ် Sivas တွင်တည်ရှိသော Kangal မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဖြစ်သော်လည်း တန်ဖိုးကြီးဖောက် မြေပိုင်ရှင်များနှင့်holdersရိယာ၏ခေါင်းဆောင်များသည်၎င်းတို့အားသိုးနှင့်ဆိတ်များအုပ်ထိန်းသူများလိုအပ်သည့်ရွာသားများကကြီးထွားစေသည်။
သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနှင့်အတူဤခွေးကျိန်းသေနိုင်ဘူး ဝံပုလွေများနှင့်အခြားတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုဖယ်ရှားပါ ။ ထို့အပြင်ယနေ့ပင်သူတို့သည်အလွန်တင်းကြပ်သောမွေးမြူရေးစံနှုန်းများကြောင့်တူညီသောအသွင်အပြင်၊ သဘောထားနှင့်အပြုအမူများရှိသည်။
Kangal သည် David နှင့် Judith Nelson တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများအားဖြင့် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်သို့ပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည်။ 1998 ခုနှစ်တွင်ဖောက်ရရှိခဲ့သည် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှု ယူနိုက်တက်ခွေးဂေဟာကလပ်မှ။
Kangals များသည်များသောအားဖြင့်အခြားမျိုးပွားများနှင့်ခွဲခြားရန်လွယ်ကူသည်။ ခွေးများဖြစ်သည့်အပြင်ခွေးများအတွက်လည်းယူနီဖောင်းအရောင်တစ်မျိုးရှိသည် အရမ်းဖျော့ ။ အချို့တွင်အနီရောင်ဖြင့်တင်ထားသည့် tan ဆံပင်များရှိ Sable အင်္ကျီများရှိနိုင်သည်။
brindle သို့မဟုတ် merle ကဲ့သို့သောပုံစံဖြင့်ကုတ်အင်္ကျီပါသောဤခွေးများကိုတွေ့ရခဲသည်။ သူတို့ရဲ့မျက်နှာလည်းများသောအားဖြင့်တစ် ဦး ရှိပါတယ် အနက်ရောင်မျက်နှာဖုံး သူတို့၏နားများသည် floppy နှင့်အနက်ရောင်တောက်ပသည်။
ကောင်းပြီ၊ မင်းတို့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပေးဖို့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကကြီးထွားနိုင်တယ် 29 မှ 33 လက်မ (၇၅ မှ ၈၅ စင်တီမီတာ) အမြင့်ရှိပြီးအလေးချိန်သည် မှ 143 ပေါင်မှ 121 (55 မှ 65 ကီလိုဂရမ်)!
အမြိုးသမီးမြားဟာသူတို့ရဲ့အထီး counterparts တွေကိုထက်သေးငယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နေဆဲ, သူတို့ကအပြုသဘောကြီးမားနေ!
သို့သော်အရွယ်အစားရှိသော်လည်း Kangals သည် ပို၍ များလေ့ရှိသည် ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နှင့်အားကစား သည်အခြားကုမ္ပဏီကြီးဝတ်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဒါက Kangal လားဒါမှမဟုတ် Anatolian Shepherd လား။
သို့သော်၊ နှစ်ခုသီးခြားဝတ်ရည် အလားတူရှိနိုင်သော်လည်းခြားနားမှုများစွာရှိနိုင်သည်။ ဤထူးခြားသောခွေးတစ်ကောင်ကို Anatolian Shepherd နှင့်မည်သို့ခွဲခြားနိုင်သည်ကိုဤတွင်ကြည့်ပါ။
ငါတို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပဲစစ်မှန်တဲ့တန်ဆောင်မုန်းလွာတစ်ခုဟာအရောင်တစ်မျိုးတည်းသာထွက်ပေါ်လာတယ်။ Anatolian သိုးထိန်းများသည်အစက်အပြောက်နှင့်အစက်အပြောက်များဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရောင်များဖြင့်လာနိုင်သည်။ တချို့ Anatolians ပင်အနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Kangals သည်နွားကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ပိုင်ရှင်၏အမိန့်မပါဘဲအန္တရာယ်ကိုသူတို့သိသောအခါတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Anatolian သိုးထိန်းတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည် စောင့်ကြည့် နှင့်ကျူးကျော်သူများကိုတိုက်ခိုက်ထက်အန္တရာယ်ကင်းထောက်ပိုမိုအသုံးပြုကြသည်။
ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုကြောင့် Kangals သည်မည်မျှအားကြီးနိုင်သည်ဟုသင်ထင်သနည်း။ သူတို့ဟာအလိုလိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ခက်ခဲတဲ့ခွေးတွေဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြပြီးပါပြီ။
သို့သော်သင်ကဒီဖောက်ရှိကြောင်းသိခဲ့ပါ အပြင်းထန်ဆုံးကိုက်အင်အားစု ဘယ်ခွေး ပျမ်းမျှ Kangal ခွေးတစ် ဦး ရှိပါတယ် တစ်စတုရန်းလက်မလျှင် PSI ပမာဏ ၇၄၃ ပေါင်ကိုက်ခြင်း ။
Kangal vs. ဝံပုလွေ
ဝံပုလွေများသည်ပျမ်းမျှကိုက်စွမ်းအားရှိသည် 400 psi သူတို့ထဲကအမြင့်ဆုံးရှိနိုင်ပါသည်နေစဉ် 1200 psi ။ ယခု Kangal ၏ကိုက်စွမ်းအား (743 psi) သည်ဝံပုလွေများနှင့်မည်သို့ကိုက်ညီနိုင်ကြောင်းသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။
များစွာသောလယ်သမားများနှင့်သိုးထိန်းများသည်သူတို့၏ခွေးများကို ၀ ံပုလွေကိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သူတို့၏ကော်များတွင်ကော်လာကော်လာများရှိသည်။
ကော်လာခွေးများကို ၀ တ်ဆင်ထားသည့် Kangal ခွေးများ ( အရင်းအမြစ် )
Cheetah vs. Kangal
ရိုင်း၏စစ်မှန်သောကြောင် -and ခွေးစစ်တိုက်! ဘယ်သူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလဲ
Cheetah တွင် PSI ၄၇၅ ခုသောအင်အားရှိသဖြင့်ဤကြောင်ကြီးများသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Kangal ခွေးနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ဒီခွေးတွေဟာအာဖရိကတိုက်ရှိ Cheetahs တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလား။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ နမီးဘီးယားတွင် Cheetah Conservation Fund မှမွေးမြူရေးတောင်သူများအားလေ့ကျင့်ပေးရန် Kangal ခွေး ၅၀၀ ကိုပေးခဲ့သည်။
ဤသည်ရုံကဒီဖောက်, သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝါနှင့်အတူ, ဘယ်လိုသိရန်သက်သေပြ တိုက်ခိုက်လျှင်သို့မဟုတ်လိုအပ်လျှင်မှသာသတ်ပစ် ။
Kangal vs. ခြင်္သေ့
ဒီခွန်အားကြီးတဲ့ခွေးဟာတောတောင်ဘုရင်နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်လို့သင်ထင်သလား။ ကောင်းပြီ, ဒီရိုင်းကြောင်လျှော့မတွက်ကြကုန်အံ့။
ခြင်္သေ့၏နိမ့်ကိုက်အင်အားသုံးစေနိုင်သည် 650 psi Kangals နှင့်မတူသည်မှာဤ felines များသည်မုဆိုးများဖြစ်သည်။ သိုးထိန်းခွေးများသည်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များမှသိုးအုပ်များကိုကာကွယ်ရန်လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရသော်လည်းထိုသတ္တဝါများတွင်ခြင်္သေ့များပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Kangal ကို ‘လို့ရည်ညွှန်းလေ့ရှိတယ် Anatolian ခြင်္သေ့ '
သူတို့ကအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်၊ အဲဒါကသူတို့အလုပ်မှာသူတို့ကိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ သူတို့ Off- တာဝန်အခါ, သငျသညျကိုသူတို့တစ်တွေရှိသည်တွေ့ပါလိမ့်မယ် နူးညံ့သိမ်မွေ့စိတ်ထားနှင့်တစ် ဦး ကြိုတင်ခန့်မှန်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ။
အဆိုပါ Kangal သစ္စာနှင့်၎င်း၏မာစတာမှကျိန်ဆို။ ပူဇော်, ထိုသို့ပေးထားရဲ့မဆိုအမိန့်ကိုနာခံပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဖောက်ကဘာလုပ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့လူသားတွေအပေါ်သစ္စာရှိသလောက်လည်းသူတို့ဟာသစ္စာရှိသူတွေပါ ကာကွယ်သည် သူတို့အတွက်အရေးကြီးတာကဘာလဲ သူတို့ပိုင်ရှင်အတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်သူတို့ကလယ်သမားတစ် ဦး ၏တိရစ္ဆာန်များကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သူတို့၏နယ်မြေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကျူးကျော်သူများကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။
ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားသည့်အခါ Kangals များသည်သူတို့၏သားကောင်များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်အရာကိုတိုက်ခိုက်ရန်သူတို့၏တွန်းအားကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းရည်ရှိသောခွေးတစ်ကောင်အတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
၂ နှစ်အရွယ်မှာတောင်ဒီခွေးတွေဟာကြီးထွားလေ့ရှိပါတယ် လွတ်လပ်ရေး၏အဓိပ္ပာယ် ။ သူတို့ပိုင်ရှင်၏အကူအညီမပါဘဲသူတို့ဘာသာစတွေးလာကြလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်အထုပ်ရဲ့အဖြစ်သင့်အခန်းကဏ္establishကိုတည်ထောင်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ် alpha Kangal ငယ်ရွယ်စဉ်။ သင်၏ခွေးသည်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အမိန့်များကိုဆက်လက်လိုက်နာရန်နှင့်မလိုလားအပ်သောအပြုအမူများကိုတားဆီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ဤခွေးအိမ်ကိုပတ်လည်၌လဲလျောင်းတွေ့မြင်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒီဖောက်သည်တက်ကြွ။ ခေတ်မီသွက်လက်သောရှိပြီးမည်သည့်အံ့အားသင့်စရာတိုက်ခိုက်မှုမှမဆိုခုန်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ကြိုက်တယ် မင်္ဂလာပါ , ရေနံချောင်း နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဂုဏ်သတင်းရသောအခြားခွေး Kangal သိုးထိန်းနှင့်ပတ်သက်။ အယူအဆမှားများအများကြီးရှိပါတယ်။
ဒဏ္ာရီ ၁။ သူတို့သည်လူသတ်သမားများဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့အာဏာရှိနေပေမယ့်သူတို့က unprovoked သတ်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ။
များစွာသောသူတို့ကဒီစွမ်းရည်ကိုတရားမ ၀ င်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံး ၀ င်သည်ဟုမြင်ကြသည် ခွေးရူး ။
ဤရွေ့ကားလုပ်နိုင်တဲ့စမတ်ခွေးဖြစ်ကြ၏ သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် တော်တော်ကောင်းကောင်း။ အကယ်၍ သူတို့ကြီးပြင်းလာရင်ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအတူတူပဲပြုမူကြလိမ့်မယ်။
ဒဏ္ာရီ # ၂– ကလေးများနှင့်မပတ်သတ်သင့်ပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံရမည်ဟုသောဒဏ္isာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနေသော်လည်းဤကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ကြသည် သဘာဝနူးညံ့သိမ်မွေ့ ကလေးတွေလာရင်!
Kangals တွေဟာသူတို့ရဲ့အ ၀ တ်အစားတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်၊ သူတို့ရဲ့ဗီဇကသူတို့မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့လူသားတွေအပေါ်ရန်လိုခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ဗီဇကပြောပြလိမ့်မယ်။
ဤလူကြီးမင်းများသည်သင်၏ကလေးများအားသူတို့ချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုရှိသောကြောင့်ကလေးများကိုခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအင်အားကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်ကလေးတွေဟာသူတို့နားရွက်ကိုဆွဲတင်တာဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေအားလုံးကိုကျော်တာကိုမမှတ်မိတော့ဘူး။
ကလေးငယ်များကိုသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အ ၀ လုံခြုံစိတ်ချစေမည်ဖြစ်သဖြင့်ကလေးများအတွက်ဤမွေးဖွားခြင်းထက်အဖော်များနည်းပါးသည်။
ဒဏ္ာရီ ၃။ မည်သူမဆို၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သားပေါက်တွေဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအထူးလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။ ဤအလိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ခြံစည်းရိုးခြံဝင်း run နှင့်စူးစမ်းဖို့နေရာအများကြီးနှင့်အတူ။ ခွေးတစ်ကောင်ကမင်းရဲ့ခွေးတွေကိုမင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလုံခြုံစေမှာပါ။
Kangal သည်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့အားသူတို့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုတစ်နေ့လုံးအိမ်တွင်သာနေစေခြင်းကရလဒ်ဖြစ်သည် ပျင်းခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း , အဖျက်သဘောထားတွေနဲ့အလွန်အကျွံဟောင်စေပါတယ်။
ဤခွေးများသည်ပိုင်ရှင်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှင်သန်နိုင်သည် ကြီးမားသောခွေးပြုစုပျိုးထောင်အတွက်အတွေ့အကြုံ ထိုကဲ့သို့သောပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏အရွယ်အစားကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသိကြသောကြောင့်သာဖြစ်သည်။
သူတို့ကတကယ်တော့အများကြီးဖြီးလိမ်းပုံမလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အထူနဲ့အတိုနှစ်ဆအင်္ကျီကိုသွန်းလိမ့်မည် တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်သာ နွေ ဦး နဲ့ဆောင်းကာလအတွင်း။
ဒီရာသီနှစ်ခုရဲ့အစမှာ နေ့စဉ်ဖြီး သတ္တုဖြီးနှင့် deshedding tools တွေကိုသုံးပြီးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီအပြင်ဘက်၌, သင်က၎င်း၏ကုတ်အင်္ကျီရုံသန့်ရှင်းနိုင်သည် တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ် ။
သူတို့ကမကြာခဏဗတ်မလိုအပ်ပါလိမ့်မည် တစ် ဦး ရေချိုး တစ်လတစ်ကြိမ် များသောအားဖြင့်ဒီခွေးကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ သင်၏ Kangal ကိုမကြာခဏရေချိုးခြင်းသည်၎င်းသည်သဘာဝအဆီများနှင့်အကြောင်းရင်းများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည် အရေပြားအခြေအနေများ ။
ဤရွေ့ကားခွေးသူတို့ရဲ့လူသိများကြသည် drool ဖို့သဘောထား , ဒါကြောင့်သင်က၎င်း၏အပေါ်တစ် ဦး အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် သွားသန့်ရှင်းရေး ။ သူတို့ကိုသန့်ရှင်း။ ဖြူဖွေးဖြူစင်သန့်ရှင်းစွာထားရန်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သူ၏သွားများကိုစင်ပါ။
အစာအာဟာရကိုပြောခြင်းဒီအစားအစာ - ဒီမျိုးကွဲရဲ့အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုအကြောင်းပြောကြစို့။ ဤကြီးသောယောက်ျားလေးများလိုအပ်သည် အရည်အသွေးမြင့် kibble သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အစားအစာ၌တည်၏။ သူ၏ခွေးတွင်အသားနှင့်ကြက်ဥကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းများလည်းရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်၏ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်အရင်ဆွေးနွေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသော Kangal အရွယ်ရောက်သူကိုပေးပါ ပရီမီယံ kibble7ခွက် နေ့စဉ်။ ဒီပမာဏဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
တစ် ဦး ကကြီးထွားလာ Kangal ခွေးကလေးလိုအပ်သည် 3000 မှ 4,800 ကယ်လိုရီ တစ်နေ့လျှင်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသူတို့ကိုနည်းနည်းလေးပေးပါ 2100 မှ 3500 နေ့စဉ်ကယ်လိုရီ လူကြီးများအတွက်နေ့စဉ်။
သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့အစားအစာအလုံအလောက်ပါဝင်သည်သငျ့သညျ ပရိုတိန်း အလယ်အလတ်ပမာဏနှင့်အတူသူတို့၏အရိုးများနှင့်အဆစ်များကိုခိုင်မာစေရန် ဘိုဟိုက်ဒရိတ် သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်တက်စောင့်ရှောက်ရန်။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဒီဖောက်န်းကျင်ကို run ဖို့ကျယ်ပြန့် - ပွင့်လင်းအာကာသအများကြီးလိုအပ်သည်။ က အိမ်နောက်ဖေးကြီးတစ်ခုဖြင့်အိမ် သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကိုယ့်ကိုအသုံးပြုဖို့သေချာပါစေ ကြိုးမဲ့ခြံစည်းရိုး သင့်ခွေးသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ခြံစည်းရိုးအောက်သို့မခုန်နိုင်သို့မဟုတ်တွင်းတူးနိုင်ခြင်းမရှိစေရန်။
Kangals သည်ရွေ့လျားရန်နေရာရှိခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည် နယ်မြေ ။ နှင့်ဤခွေးရဲ့အရွယ်အစားပေးထား, သင်ကသင့်ရဲ့တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ခွင့်ပြုရန်အိမ်ရှင်တစ် ဦး ရတဲ့အခက်အခဲများရှိနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သူတို့ကခြံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ဖို့တာဝန်ပေးခံရမယ်ဆိုရင် Kangal ခွေးတွေဟာပိုပြီးထိရောက်လိမ့်မယ် အသင်းကစားသမားများ ။ အကောင်းဆုံးအသင်းကိုဘက်မလိုက်သောယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဤခွေးများသည်သားကောင်သို့မဟုတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါရန်လိုတတ်သည်။ ဒါ သုံးအဆင့်ချဉ်းကပ်မှု တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သည်သိုးအုပ်နောက်လိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း။
အဆင့် ၁- အခေါက်
သူသတိထားမိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Kangal ခွေးသည်ရန်သူအားမိမိဒေသတွင်ရှိနေကြောင်းသတိပေးလိုက်သည်။ သူတို့ကဖြစ်နိုင်သောတိုက်ခိုက်သူခြိမ်းခြောက်ဖို့ဒီလုပ်ပါ။
အဆင့် ၂ - ဟောက်တယ်
ရန်သူ budge လိမ့်မည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်မှာအားလုံးခြိမ်းခြောက်မပါလျှင်ယခုသူတို့သည်ချဉ်းကပ်၏ဤအဆင့်သို့ရွှေ့။ ဟောက်ခြင်း၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မှအခြားတိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့ပင်ရန်သူဆက်ဖြစ်နေပါကရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆင့် ၃ - တိုက်ခိုက်မှု
အကယ်၍ သားကောင်သည် ဆက်၍ ချဉ်းကပ်ပါကဤဖောက်သည်သည်သိုးများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခုခံကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့်သိုးအုပ်ကိုကာကွယ်လိမ့်မည်။ သူတို့တစ်စုံတစ်ရာကိုသို့မဟုတ်မည်သူ့ကိုမျှသူတို့၏နယ်မြေသို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုဘယ်တော့မျှခွင့်မပြုပါ။
အပြင်အပြင်းထန်ဆုံးခွေးအချို့ဖြစ်ခြင်းကနေသူတို့ပါပဲ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝတ်ရည်တစ်ခုဖြစ်သည် လည်း။
ကြီးမားသောဖောက်ခွဲရန်ကြီးမားသော တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia ထွက်စောင့်ကြည့်ဖို့ Kangal ခွေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်။ ၎င်းသည်တင်ပါးဆုံရိုးအရိုးများစနစ်တကျမဖွံ့ဖြိုးသော၊ အနာအဆစ်နှင့်ဆိုင်သောအနာရောဂါဖြစ်ပွားစေသည့်မွေးရာပါရောဂါဖြစ်သည်။
မင်းသူ့ကိုဂရုစိုက်နေတုန်းသူ့ရင်ဘတ်ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အဖုတွေခံစားရရင်မင်းရဲ့ခွေးကို VET ဆီခေါ်သွားပါ။
နောက်ထပ်မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါဖြစ်သည့်ဤအချက်သည်မျက်ခွံပုံပျက်သောကြောင့်အူအတွင်းသို့ခေါက်စေသည်။ မျက်ခုံးများခေါက်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မျက်ခုံးနှင့်ဆံပင်များသည်မျက်လုံးagainstရိယာကိုဆန့်ကျင်။ ယားယံ။ အဆင်မပြေမှုများဖြစ်လာနိုင်သည်။
ပုံမှန်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနများမှတစ်ဆင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအလွယ်တကူကုသနိုင်သည် အစောပိုင်းရောဂါနှင့်ကုသမှု ။
ဤတည်ကြည်သောအဖော်များနှင့်အကာအကွယ်ပေးသည့်အစောင့်ခွေးများကိုသင့်ဘေးတွင်ကြာမြင့်စွာထားရှိခြင်းသည် Kangal ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းသည် 12 မှ 15 နှစ် ။
သူတို့ပြောတာကိုမင်းသိတယ်။ ကြီးမားသောစွမ်းအားဖြင့်ကြီးမားသောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသည်။ '
ဒါက အားကြီးသောနှင့်အစွမ်းထက်ဖောက် ပြီးတော့ဒီခွေးတွေလိုအပ်တာကသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဘယ်လိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာသိရမည့်တာ ၀ န်ရှိသည့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ Kangal ကိုသင်၏မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များအားကာကွယ်ရန်လေ့ကျင့်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်ခွေး၏အပြုအမူကိုသင်ပေးလိုသည်ဖြစ်စေ၊ သင်လိုအပ်သည် သူတို့ကိုငယ်ရွယ်လေ့ကျင့်ပါ ။
လူသားများ၊ သူစိမ်းများကိုပင်ခင်မင်ရင်းနှီးရန်နူးညံ့သော Kangal ခွေးကလေးကိုဘယ်တော့မှမလေ့ကျင့်ပါနှင့်။ သူတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည် ။ ဤတွင်သူတို့သည်လွတ်လပ်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးပင်ကိုအသိစိတ်ဖြင့်စတင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။
အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းလက္ခဏာများကိုပြသသည့်အခါ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းဆုချသင့်သည် ကျူးကျော် သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ရေးမှတဆင့်စိတ်ဓာတ်ကျရမည်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကိုသူစိမ်းများနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးရန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်သူတို့၏အကာအကွယ်စွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။ အကယ်၍ စနစ်တကျလူမှုရေး လူများနှင့်အတူ, ဤခွေးကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသို့မဟုတ်ဖော်ရွေသူစိမ်းများ၏ရှေ့မှောက်၌သာဟောင်သို့မဟုတ်ဟောက်လိမ့်မယ်။
ခွေးရယူခြင်း ဒီအရွယ်၏ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်, အဘယ်သူမျှမ Pun ရည်ရွယ်ပါသည်။ Kangal ကဲ့သို့သောခိုင်မြဲသည့်မျိုးနွယ်တစ်ခုသည်ပိုင်ရှင်နှင့်ရှင်သန်လိမ့်မည်။
ငါ Kangal ခွေးတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့မြို့မှာနေထိုင်ကြသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော Kangal မျိုးဆက်များရှာဖွေခြင်း
The အမေရိကန်ကန်ဂယ်ခွေးကလပ် (KDCA) ဤအအံ့သြဖွယ်ခွေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကြီးထွားလာဖြစ်ကြောင်းသေချာ၏စောင့်ရှောက်မှုကြာပါသည်။
အဆိုပါကလပ်တစ် ဦး နှင့်အတူတက်လာခဲ့သည် မျိုးဆက်များကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ဤအခွေးတစ်ကောင်၏သင့်လျော်သောမွေးမြူရေးနှင့်ဝယ်ယူတည်ထောင်ရန်။
မျိုးဆက်များအနေဖြင့်စစ်မှန်သောကန်ဂလီများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်များကိုခွဲခြားထားသည် အချို့အရည်အချင်းမပြည့်မှီမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း ခွေးရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ထား၌တည်၏။
သန့်စင်သော Kangals များအတွက်မြင့်မားသောလေးစားမှုသည်ဖောက်ခွဲမှုအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အရေးကြီးသည်။
တူရကီလည်းရှိပါတယ် Kangals ၏တင်ပို့မှုကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့သည် အဆိုပါဖောက်ရဲ့ pedigree ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်။ ဤအခွေးအမေရိကန်၌ရှားပါးဒါကြောင့်ပါပဲ။
မျိုးပွားမှုနည်းပါးခြင်းကလည်းစျေးနှုန်းများတက်စေသည်။ တစ်ခုတည်း Kangal pup ဘယ်နေရာကနေမဆိုကုန်ကျလိမ့်မည် $ 2,000 မှ $ 4,000 ။
ဒီခွေးတွေဟာ US မှာတရားဝင်ပေမယ့်၊ ဥပဒေများသည်ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားနိုင်သည် ။ သင်ဤဖောက်မှုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လိုလျှင်သင့်yourရိယာအတွင်းရှိမျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။
သင်ဝယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ထားသော Kangal သည်၎င်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းကိုလည်းသိရန်အရေးကြီးသည် ယူနိုက်တက်ဂေဟာအိုးကလပ် သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင့်လျော်သောမှတ်ပုံတင်ထားသောမိဘများရှိသည်။
သင်ကနေဒါနှင့်အမေရိကန်၌နေထိုင်ပါက UKC သည် Kangal ခွေးများအတွက်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောခွေးများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်ရန်ဤယုံကြည်စိတ်ချရသော Kangal မျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
အီဗန် Mills ကကျွဲနွားကုမ္ပဏီ - အစကန ဦး တွင်မွေးမြူရေးခြံတစ်ခုဖြစ်သည့်ကျွဲနွားများကိုသာမွေးမြူခဲ့သည့် Kentucky အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်သူတို့၏ခွေးများကိုကျက်စားသည့်ငှက်များနှင့်လင်းယုန်ငှက်များကိုစတင်မွေးမြူခဲ့သည်။ သူတို့သည်အဓိကအားဖြင့် Kangals ကိုအလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ထားရန်စိတ်ဝင်စားသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ထံမှခွေးတစ်ကောင်ဝယ်ယူရန်လျှောက်လွှာတစ်ခုကိုဖြည့်ရမည်။
Kangal Dog Town - မက်ဆာချူးဆက်တွင်အခြေစိုက်။ ဤမျိုးပွားသူသည်အရည်အသွေးမြင့် Kangal ခွေးများကိုမွေးဖွားခြင်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ထုတ်လုပ်သည်။ ဤပိုင်ရှင်သည်တူရကီနိုင်ငံ၏အမျိုးသားရတနာကိုထိန်းသိမ်းရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားပြီးထိုခွေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာရန်ဥရောပနှင့်တူရကီနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းခရီးထွက်ခဲ့သည်။
Sivas Regal Kangal ခွေးများ - မြောက်ကာရိုလိုင်းနားတွင်တည်ရှိသောဤမျိုးဆက်များသည်တူရကီဌာနေ Kangals များကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ သူတို့ဟာတူရကီကိုဖြတ်ပြီးဒီမြောင်းငယ်လေးတွေမွေးမြူဖို့ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့သွားကြတယ်။
သငျသညျ Kangal ခွေးချင်ပေမယ့်မျိုးဆက်များမှတစ် ဦး အသားရရှိရန်များအတွက်ဘတ်ဂျက်မလိုပါလျှင်, ကလေးမွေးစားခြင်းသင်၏နောက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် Kangal သိုးထိန်းအိမ်အသစ်တစ်ခုပေးပါ။
အမေရိကန်ကန်ဂယ်ခွေးကလပ် (KDCA) - ၎င်းတို့သည်လိုအပ်နေသော Kangal ခွေးများကိုကာကွယ်ပေးသည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
National Anatolian Shepherd Rescue Network (NASRN) ဤသည်သည်မွေးစားနေအိမ်ဖြစ်ပြီးမလိုလားအပ်သောအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခံထားရသော Kangals နှင့် Anatolian လက်ဝါးကပ်တိုင်များအတွက်ယာယီခိုလှုံစရာနေရာဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အသစ်သောမွေးစားခွေးကိုဂရုစိုက်ရန်ကူညီသည့်အဖွဲ့သည်ကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များလည်းပေးသည်။
တူရကီ Kangal သည်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း၎င်းထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အများဆုံးသစ္စာစောင့်သိနှင့်အကာအကွယ်ခွေး မည်သူမဆိုရှိနိုင်သည်။
ဒီခွေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ် နူးညံ့သိမ်မွေ့အုပ်ထိန်းသူများ ကလေးတွေနှင့်သူတို့အထုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလူများပတ်လည်။
သူတို့လိုအပ်တယ် သန်စွမ်းသောလေ့ကျင့်ခန်းများများ နေ့တိုင်းသူတို့ပတ်ပတ်လည်ရွှေ့ဖို့နေရာအများကြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုဖို့လိုတယ်၊
အဆိုပါ Kangal ကျိန်းသေသင်၏သာမန်ခွေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကဒီရှိခြင်းကိုချစ်ပါလိမ့်မယ် ကျိန်စာ ပတ်ပတ်လည်ဖောက်။
Mountain Feist: အပြည့်အဝမွေးမြူရေးလမ်းညွှန် (အရွယ်အစား၊ ခွေးပေါက်စများနှင့် temperament)
Kuvasz Dog Breed အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
siberian husky အမျိုးသမီးအမည်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်များ
အနီရောင်နှာခေါင်းတွင်း pitbull ဘယ်လောက်လဲ